Onye na-elekọta mmadụ: 7,000 Social Influencers in Your Ready | Martech Zone
Fraịde, Septemba 27, 2013 Tọzdee, Septemba 26, 2013 Douglas Karr
ChaCha bụ nnukwu ụlọ ọrụ mụ na ya rụkọrọ ọrụ oge ụfọdụ mgbe izizi m ọrụ m. O siri ike ikwere na ChaCha dị afọ 8… ụlọ ọrụ ahụ na-eme ngwa ngwa ma na-agagharị ma na-emeziwanye mgbe niile. Ha abughi ulo oru ndagwurugwu, ya mere na ha adighi adi na ntaneti - ma ha na arapara na webusaiti kacha elu n’uwa maka ahia. Na oge na-aga, ahụrụ m ha ka ha na-agbakọ buru ibu. Na-eso gbaa ọhụụ ọhụrụ maka azụmahịa.
Ọ bụ ezie na ChaCha abanye na obodo ha iji kesaa ihe ọmụma, ọ dịghị onye na-abụghị netwọkụ nwere ohere ọ bụla - rue mgbe Onye na-elekọta mmadụ. Social Reactor bụ ikpo okwu mgbasa ozi nke na-enyere ụdị aka ijikọ ndị ziri ezi site na mmekọrịta ha na ndị na-eduzi mmekọrịta mmadụ na ibe ya. Netwọk adịchaghị, nke ejiri nlezianya họrọ iji bulie ozi gị ma mepụta njikọta ndị ahịa maka akara gị.
Site na ndị na-emetụta ihe karịrị 7,000, iru netwọk ha dị ịtụnanya - na-erute ọtụtụ narị nde mmadụ. A na-enyocha ndị na-eme ihe iji hụ na ekwesighi iji okwu rere ure, ozi ndị ahụ anaghị eduhie mmadụ, a na-egosikwa mgbasa ozi ahụ nke ọma.
Mgbe onye na-emetụta ihe na-abanye na Social Reactor, a na-enye ha ndepụta ahaziri nke mkpọsa ndị dị ugbu a. Nke a abụghị usoro akpaghị aka ebe Social Reactor nwere ike ikpebi ihe ịkwanye ma mee ya na nnọchite gị. Ndị nwere ike ịgụ, nyochaa ma sonye na mkpọsa nke nhọrọ ha. Ha nwekwara ike inyocha ha isslọrụ - eleghara m ebe ọ bụ na m na-amalite;;.
Y’oburu n’inwe ihe ngbali, Social Reactor choro ka i banye n’uwa! Ha na-achọ ndị na-eme mmekọrịta mmadụ na ibe ha nwere ezigbo njikọ ha na ndị na-eso ụzọ ha. Ha na-achọ ndị ndu na ọwa mmekọrịta ndị ghọtara ndị na-ege ha ntị. Ha choro ndi mara ihe nke mara ka esi agha okwu siri ike nke na akpali ndi na-ege ha nti ime ihe. Jikọọ Mmetụta ndị na-elekọta mmadụ now.
Tags: Chachachọta ndị na-eme ihemmetụtammetụta ahịamgbasa mgbasa ozi mgbasa ozina-elekọta mmadụ chernobyl
Sep 23, 2015 na 10:46 PM
Ole ụmụazụ ole ịkwesịrị isonye
Sep 24, 2015 na 3:52 PM
Ndewo Alison - Amaghị m na kọntaktị m anọkwaghị! I nwere ike ịkpọtụrụ ha ozugbo.